ဒီကနေ့အဓိကကျတဲ့အချက်မှာ M1 ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့ Mac mini အသစ်တစ်ခု | ငါက Mac ပါ
Toni Cortes | | Apple mac Mini ကို
အခုနောက်ဆုံးပေါ် Apple တင်ဆက်မှုမှာငါတို့မျှော်လင့်မထားတဲ့စက်တစ်လုံးကို "ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီ" ။ Apple Silicon ခေတ်သစ်၏ပထမဆုံး Mac များသည် MacBook အချို့နှင့်ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူ iMac အသစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသော်လည်းမည်သူမျှ Mac က mini ကို.
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Mac mini အသစ်တစ်ခုရှိတယ် M1 ပရိုဆက်ဆာစွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလက်ရှိမော်ဒယ်ထက်ယူရိုတစ်ရာအထက်မှာယနေ့အထိရှိသည်။ ထိုအထိပ်၏ကလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းပေးပို့နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ သံသယမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းပါစေသော။ ဒီပစ္စည်းအသစ်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ကြရအောင်။
Mac mini အသစ်နှင့်အတူ M1 ပရိုဆက်ဆာ အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အံ့အားသင့်စေမှာပါ«နောက်တစ်ခု»ဒါကခဏအကြာအဆုံးသတ်ခဲ့သည် လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက် Apple Silicon စီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည့်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ Apple သည်ကျေနပ်အားရနိုင်သည်။
သူတို့ဟာဇွန်လ WWDC ရဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်မှာ Apple Silicon စီမံကိန်းဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြရတယ်။ ယခုတွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်ပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးသည့်အခါမရှိသောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုနှင့်စကားပြောခဲ့သည် A14XApple သည်၎င်း၏ M1 ချစ်ပ်အသစ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီး Mac mini တွင်လည်းတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
Mac Mini Apple Silicon ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အရမ်းကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ Apple Silicon တစ်ခုလုံး။
ဒါက Mac mini အသစ်ရဲ့အခြေခံမော်ဒယ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းထားတာက
1-core CPU၊ 8-core GPU နှင့် 8-core Neural Engine ပါသော Apple M16 ချစ်ပ်
256GB SSD သိုလှောင်မှု
၎င်းကို Apple web Store တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်။ 799 ယူရို။ ထို့အပြင် SSD သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ ၂၅၆ GB မှ ၅၁၂ အထိသာကွာခြားသည့် ၁.၀၂၉ ယူရိုပိုစျေးကြီးသောဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်။
ဒီနှစ်ခုလုံးမှာ RAM ကို 16 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်ပြီး SSD ကို2TB အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သင်မှာပြီးပါပြီ ဝဘ် Apple Store မှဖြန့်ဝေရန်စီစဉ်ထားသည် လာမည့်အပတ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Apple mac Mini ကို » ဒီနေ့အဓိကကျတဲ့အချက်မှာ M1 ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့ Mac mini အသစ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်
MacBook Air အသစ် M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူယနေ့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်